Caawinta Qormada Somalia
Ma u baahan tahay caawimaad qoris xirfadeed? Ka hel warqad tayo sare leh Caawinta Qormada ee ugu wanaagsan Somalia ku qoran dhammaan heerarka tacliimeed.
Sida Loo Helo Caawinta Qoraalka
Waxaa laga yaabaa inaad isweydiiso, 'Oh, maya mar dambe! Sideen uga fogaan karaa qorista qormo kale oo dheer, adag, waqti badan ku qaadanaysa?
- Qoraalka maqaalka ama qorista caawinta qormada waa uun guji! Waxaa jira maqaallo badan oo waxtar leh oo kugu hagaya sida ugu wanaagsan ee aad uqorto qormo si habeysan oo habeysan loo qabtay. Ka fiiri internetka tilmaamahan waxtar leh. Qodobadani waxay kaa caawin doonaan inaad ogaato waxa la sameeyo, goorta la sameynayo, meesha laga bilaabayo, iyo sida loo dhammeeyo. Kuwani waa qaar ka mid ah tilmaamaha ay qorayaal badan oo xirfadleyaal ahi u adeegsadaan inay la yimaadaan qormooyin wax ku ool ah.
- Qorista qoraalka iyo qorista qormada ayaa waliba macnaheedu yahay sameynta dulucda qoraalkaaga. Halkani waa halka aad ku liis garaynayso dhammaan qodobbada ama mawduucyada muhiimka ah ee aad rabto inaad ku darto qormadaada. Sidoo kale waa inaad fiiro gaar ah siisaa qaybaha kala duwan ee qoraalkaaga. Hubso in dhammaan qodobbada qoraalkaaga la xuso oo si habboon loogu daro qoraalkaaga.
- Intaa waxaa dheer, caawinta qoraalka ayaa sidoo kale loola jeedaa adeegsiga barnaamijyo wax ku ool ah oo qorista. Qalabka qorista maqaalka kumbuyuutarka ku saleysan waa habka ugu wanaagsan ee loo abaabulo fikirkaaga, abaabulka macluumaadkaaga, iyo xitaa qorista qormada. Markaad isticmaaleyso qalabka wax lagu qoro ee kumbuyuutarka ku shaqeeya, kama sii baahnid inaad ka walwasho qorista qormada gacanta. Qalabka qoraalka oo wanaagsan, waxaad awoodi doontaa inaad ku dhammaystirto curis si ka dhakhso badan oo ka fudud sidii hore.
- Ugu dambeyntiina, caawimaadda qormada ayaa sidoo kale loola jeedaa adeegsiga barnaamijka caawimaadda qorista. Software-kan ayaa kaa caawin kara hawsha dhammaystirka qoraalkaaga. Adoo adeegsanaya qalab wax ku ool ah oo wax ku ool ah, uma baahnid inaad waqti lumis iyo dadaal badan ku lumiso raadinta ereyada gaarka ah ee la adeegsanayo. Taabadalkeed, softiweerkani wuxuu kuu qaban doonaa shaqada adiga oo ku siinaya ereyada saxda ah iyo muujinta aad u baahan tahay inaad adeegsato.
Kuwani waa qaar ka mid ah siyaabaha aad uga heli karto qormada caawimaad. Markaad aqoonsatid qormooyinkan qalabka wax lagu qoro ee qalabka softiweerka, waxa kaliya ee aad u baahan tahay inaad sameyso ayaa ah inaad iyaga rakibto oo aad bilowdo isticmaalkeeda.
Caawinta Qormada marwalba way jirtaa hadaad codsato. Markasta oo aad waxbadan barato oo aad ku tababarto, way fududaanaysaa, markaa maanta tijaabi oo bal naftaada u arag faraqa ay ku samayn karto guushaada qormooyin.
Caawinta qoraalka waa mid aad muhiim u ah maxaa yeelay waxay kuu oggolaaneysaa inaad awood u yeelatid inaad dhammaystirto qormadaada iyada oo aan laga helin walaaca iyo jahwareerka ay dadka kale la kulmaan markay awoodi kari waayaan qorista qormada. Waxay sidoo kale ku siiyaan kalsoonida aad u baahan tahay si aad fikraddaada uga gudubto una dhammaystirto howshaada.
Si aad ugu guuleysato qormo kasta, qoris ama si kale, waa inaad ku kalsoon tahay xirfadahaaga qorista. Waxaad ubaahantahay inaad si raaxo leh wax uqorto soona bandhigto macluumaadkaaga adigoon walwal ka qabin sida aad uga dhaadhacdo hadalkaaga. Haddii aadan ku kalsoonayn qormadaada, waxaa laga yaabaa inaad sidoo kale aadan bilaabin.
Taasi waa sababta aad ugu baahan tahay caawimaad qormada. Adoo ka faa'iideysanaya ilaha badan ee khadka tooska ah laga helo ee kaa caawiya qorista si ay kaaga caawiso qoristaada, waxaad awoodi doontaa inaad keydiso waqti, lacag, iyo walbahaar. Waxaad sidoo kale awood u yeelan doontaa inaad wax qorto si karti leh oo hufan.
Waxaa jira degello internetka ah oo maanta la heli karo kuwaas oo ku siin doona caawimaad qorista qorista oo qiimo leh. Websaydhadaan waxay bixiyaan caawimaadda qormada ee ugufiican, badankooduna waxay bixiyaan talooyin kaladuwan oo kaladuwan oo aad u adeegsan karto si ay kaaga caawiyaan inaad la timaadid shaqooyin heer sare ah saacado gudahood.
Websaydhadan waxay sidoo kale kuu oggolaanayaan inaad adeegsato barnaamijyadooda si ay kaaga caawiyaan abaabulka qoraalkaaga oo ay kuu siiyaan caawimaadda ugu fiican qormada. Marnaba uma baahnid inaad ku lumiso waqtigaaga qaaliga ah raadinta ereyada loo adeegsado iyo muujinta habboon.